နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံ Send | USAHello ထံမှအရင်းအမြစ်များ | USAHello
အခြားနိုင်ငံများတွင်လူတွေကိုပိုက်ဆံပေးပို့ရန်လွယ်ကူသည်. နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပို့ပေးရန်အတော်ကြာလုံခြုံပြီးအမြန်လမ်းရှိပါတယ်. မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာတခြားနိုင်ငံတွေမှပိုက်ဆံပေးပို့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
MoneyGram သို့မဟုတ် WalMart2World နှင့်အတူပိုက်ဆံ Send
MoneyGram နှင့် WalMart2World သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ကြသည်. သူတို့ကလုနီးပါးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအတွင်းနိုင်ငံများအတွက်အလုပ်နှစ်ခုလုံးကို.
MoneyGram သို့မဟုတ် WalMart2World မှတဆင့်ငွေပို့ပေးရန်, သင်ပထမဦးဆုံးသူတို့အလုပ်လုပ်တည်နေရာကိုရှာဖွေရမယ်. WalMart2World အားလုံး Walmart စတိုးဆိုင်၌တည်ရှိ၏. MoneyGram နေရာများတွင်စူပါမားကက်များမှာ, အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များ, နှင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်. သငျသညျဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ငွေသားဆောင်ခဲ့ရမည်. သင်သည်သင်၏အကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်သုံးစွဲဖို့မတတျနိုငျများမှာ. သင်ရှာလိုရသည် MoneyGram နှင့် Walmart သငျသညျအနီးနေရာများတွင်.
သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်ပေးပို့လိုပါက, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် WalMart2World ၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု. သင်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းပါလိမ့်မယ်. WalMart2World နှင့်အတူ, ငွေကိုမိနစ်ရောက်ရှိနှင့်အဖိုးအခအနိမ့်များမှာ. အဆိုပါဝန်ဆောင်ခများမှာ တစ်ဦး fixed ငွေပမာဏ, သို့မဟုတ် "ပြားကြေး။ " MoneyGram အနည်းငယ်ပိုပြီးစျေးကြီးခြင်းနှင့်နှေးကွေးဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦး Walmart သွားရောက်နိုင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်မူကားကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်မကြာခဏနိုင်ငံတကာကငွေပို့လိုလျှင်, ဘဏ်အကောင့်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးက. သင့်အိမ်များတွင်ငွေသားတွေအများကြီး Keeping USA တွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး. ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ဘဏ်များနှင့်မည်သို့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်အကြောင်းလေ့လာရန်.
သငျသညျပိုက်ဆံပို့ခင်, သင်ပိုက်ဆံရတဲ့လူတစ်ဦးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါဘဏ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုသည် လက်လံသူ. အဆိုပါဘဏ်လက်ခံရရှိသူရဲ့နာမအဘို့သင့်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်, ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်, တခါတရံသူတို့ရဲ့လိပ်စာ.
အချို့နိုင်ငံများတွင်များအတွက်, သင်တစ်ဦးဘဏ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဤရွေ့ကား Iban များမှာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်အကောင့်နံပါတ်) သို့မဟုတ် SWIFT / BIC နံပါတ်များ. သငျသညျဒီနံပါတ်ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကငွေကိုလက်ခံရရှိသူလူတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ဘဏ်ကိုမေးဖူး.
ခဏခဏ, သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်ပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအကူအညီလိုအပ်ပါသို့မဟုတ်ရွေးချယ်စရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသေချာမသိကြပါလျှင်, သင်၏ဘဏ်ကိုသွား. သင့်အနေဖြင့်ဧည့်ခံကိုပြတင်းပေါက်၌အလုပ်သမားစကားပြောနိုင်ပြီးသူတို့သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
ဘဏ်များနိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံမပို့ဘို့သင့်ကိုအခကြေးငွေကောက်ခံပါလိမ့်မယ်. အခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်သေချာပါစေ (ဒါကြောင့်ကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်).
Western Union နှင့်အတူပိုက်ဆံ Send
Western Union ဟာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတစျဆငျ့ပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ website သို့မဟုတ်မိမိတို့၏စမတ်ဖုန်း app ကို. သင်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံပို့ပေးရန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကအစသင်တစ်ဦးအခကြေးငွေကောက်ခံသွားမည်. သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ရှိမထားဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲ Western Union မှတဆင့်နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒေသခံနျဌာနခှဲ.
ဒေသခံတစ်ဦးဌာနခွဲမှာ, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, သငျသညျငွေသားနှင့်အတူပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျမှပိုက်ဆံမပို့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးဘဏ်အကောင့်မပါဘူးဆိုရင်ဒီစကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့စာကိုလက်ခံရရှိသူကသူတို့ကိုအနီး Western Union နျဌာနခှဲရှိပါက, သူတို့အစားပိုက်ဆံကောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရထုတ်ပေး ID ကိုပေါ်အဖြစ်သင့်လက်ခံရရှိသူရဲ့နာမညျကို
သင့်ရဲ့လက်ခံရရှိသူရဲ့မြို့သို့မဟုတ်မြို့တွင်း, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်, နှင့်တိုင်းပြည်
သင့်ရဲ့အစိုးရထုတ်ပေး ID ကို
Xoom နှင့် Paypal ဖြင့်ပိုက်ဆံ Send
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုက်ဆံအင်တာနက်အပေါ်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစနစ်က Xoom ဖြစ်ပါသည်. အခါသင် တစ်ဦး Xoom အကောင့်ဖွင့်လှစ်, သင်ပိုမိုပေးဖို့နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ် 100 တရာနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ. အဆိုပါ ပိုက်ဆံမပို့၏ကုန်ကျစရိတ် Xoom အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်. တခါတရံသတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေဖြစ်ပါသည်. တခါတရံမှာသူတို့တစ်တွေရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံ. သငျသညျပိုက်ဆံပို့ပေးရန်ဘဏ်အကောင့်အသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ဆီသို့မပို့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အသေးစိတျမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
Xoom ပစ်ကပ်နေရာများတွင်ရှိပါတယ်, အရာကိုသင်ပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားအဆုံးမှာငွေသားထဲမှာကောက်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတယ်. တခါတလေ, သင်တို့ဆီသို့မပို့နေသောလူတစ်ဦးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းကဖွင့်ကောက်လို့ရပါတယ်. အချို့နိုင်ငံများတွင်များအတွက်, သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်မှငွေသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်မှပေးပို့သည့်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, လွန်း.
သင်စမတ်ဖုန်းရှိပါက, သင် Xoom app ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ထိုအခါသင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ပိုက်ဆံပို့ပေးရန် Xoom ကိုသုံးနိုင်သည်.
Xoom သာလူတွေကိုပိုက်ဆံမပို့ဘို့ဖြစ်၏. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှပိုက်ဆံပေးပို့လိုလျှင်, သငျသညျတစျဆငျ့ပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ် PayPal က. paypal Xoom ပိုင်ဆိုင်.
သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်မှတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သို့သော်အချို့နိုင်ငံများကအလွန်ခက်ခဲနိုင်ငံခြားစစ်ဆေးမှုများခံယူစေ. နိုင်ငံခြားရေးဘဏ်များကသူတို့ကိုငွေသွင်းဖို့ကြီးမားတဲ့အခကြေးငွေကောက်ခံသွားမည်.
တစ်ဦးကပိုက်ဆံအလို့ငှာတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့် Pre-အတည်ပြုခြင်းနှင့်များအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာလက်ခံသူ၏အမည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်စက္ကူပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မပြောင်းနိုင်ဟုဆိုလိုသည်. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုက်ဆံအလို့ငှာကုန်ကျစရိတ် $8. 55 အဘို့ အထိတန်ဖိုးများ $700 ($500 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနှင့်ဂိုင်ယာနာများအတွက်). သငျသညျဘဏ်များမှာပိုက်ဆံအမိန့်ရနိုင်, စာတိုက်, တချို့စတိုးဆိုင်များ. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အမေရိကန်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုက်ဆံအမိန့်.
လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေကိုသင်ပိုက်ဆံမပို့ဘို့အပေးဆောင်ပိုက်ဆံများမှာ. ဒါဟာသင်ပို့ပမာဏ၏တစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်က fixed ငွေပမာဏကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ,
ငွေလဲနှုန်းပမာဏတဦးတည်းငွေကြေးများမှာ (ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်) အခြားငွေကြေးတန်ဖိုး (ထိုကဲ့သို့သောယူရိုအဖြစ်). အဆိုပါနှုန်းထားများလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုပြောင်းလဲရန်. တစ်ခါတစ်ရံသင်ပိုက်ဆံမပို့များအတွက်ငွေကြေးလဲလှယ်ကြေးအဖြစ်တစ်ဦးအခကြေးငွေပေးဆောင်. ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်ခကိုရှင်းပြဖို့ဘဏ်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုမေးပါ.
ဘယ်လိုကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်: ကြည့် အားလုံး ကုန်ကျစရိတ်များ. ဒါဟာသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်.
ပို့ဆောင်ချိန်: အမြဲတမ်းသင်လွှဲပြောင်းယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရှည်လျားကိုသိနေတာသေချာပါစေ. သငျသညျအရေးပေါ်အဘို့ပိုက်ဆံမပို့နေတယ်ဆိုရင်, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, Xoom, သို့မဟုတ် Walmart2World သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ.
အကောင့်အသေးစိတ်ကို: အကောင့် အသုံးပြု. ပိုက်ဆံမပို့နှင့်နံပါတ်များကို routing သည့်အခါ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုစစ်ဆေး. သူတို့မှန်ကန်သောမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ပိုက်ဆံရှိရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.